I-Cold Paint Spraying Road Marking Machine Manufacturers | I-China Cold Paint Spraying Road Marking Machine Factory & Abahlinzeki
—— Umshini Wokumaka Umgwaqo Okhanyayo Wobanda ——
Umshini Wokumaka Umgwaqo we-LXD-9L Pressure High
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yezandla ecindezela imishini yokupenda yomgwaqo engenamoya ebandayo. I-LXD-9L iyona eshesha kunazo zonke phakathi kwemishini yethu yokumaka yomgwaqo ebandayo, isivinini sayo sokusebenza singafinyelela ku-13kh / h,
Umshini Wokumaka Umgwaqo we-LXD-6L Pressure High
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yezandla ecindezela imishini yokupenda yomgwaqo engenamoya ebandayo. Kuyinto yokusebenza ekhethekile yokwakhiwa kwepende lokushisa elijwayelekile. Ifanele imigwaqo, umgwaqo omkhulu, indawo yokupaka, isikhumulo sezindiza, isiteshi. Ingamaka umugqa oqondile, umugqa onamachashazi, ijika, ukweqa idube, imicibisholo, njll.
Singumkhiqizi omkhulu waseChina osebenza ngobuchwepheshe nefektri yemishini yokumaka kagesi ebandayo kagesi. Ingasebenza amahora ama-4 ngokushaja okukodwa okugcwele, okulula ukusebenza nokugcina. Ingasetshenziswa kabanzi ezindaweni eziningi, njengebhola lezinyawo, isikole, umphakathi, indawo yokupaka, ifektri, izikole zokushayela, igalaji likaphethiloli, njll.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yomshini wokumaka umgwaqo obandayo ongenawo umoya obandayo. Kuyimishini ekhethekile ekwakhiweni kwepende lokushisa okujwayelekile. Ifanele imigwaqo, umgwaqo omkhulu, indawo yokupaka, isikhumulo sezindiza, isiteshi.it ingamaka umugqa oqondile, umugqa onamachashazi, ijika, ukuwela idube, imicibisholo, njll.
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yeloli eligibele imishini emibili yokumisa imigwaqo yokupenda yomgwaqo ebandayo. Idizayinelwe umgwaqo omkhulu, ikakhulukazi isebenza emgwaqeni wedolobha, esikhumulweni sezindiza nendlela eqondile njll.Ingamaka umugqa wangempela, umugqa onamachashazi, umugqa ophuzi ophindwe njll. Inesibhamu sokufafaza esiphindwe kabili nebhakede lokupenda kabili, futhi ungangeza isibhamu sokufafaza esengeziwe, ukusenza simake imigqa ngombala ohlukile ngasikhathi sinye.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yokushayela imishini yokugaya umgwaqo ebandayo. Isipele se-Glass ubuhlalu: Ukuhanjiswa kwe-pneumatic (ingcindezi yokusebenza eguquguqukayo). I-Hydraulic agitator: ithangi ngalinye lokupenda lifakwe i-Hydraulic agitator.